Fahasamihafana eo amin'ny vy tsy miankina Austenitika sy Martensitika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny vy tsy miankina Austenitika sy Martensitika | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / Simia / Simia indostrialy / Fahasamihafana eo amin'ny Stainless Steel Austenitika sy Martensitika
Fahasamihafana eo amin'ny vy tsy manara-penitra Austenitika sy Martensitika
3 Jolay 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vy austenitika sy martensitika dia ny firafitry ny krystaly vy austenitika dia rafitra cubic centered-tarehy, fa ny firafitry ny kiran'ny vy vy martensitika dia rafitra cubic mifantoka amin'ny vatana .
Misy vondrona lehibe efatra an'ny vy tsy misy fangarony araka ny firafitry ny vy: austenitika, ferritika, martensitika ary duplex. Ity mikraostrikan'ireto firavaka ireto dia miankina amin'ny singa mampangaroharo misy azy ireo; arak'izany, ireo firavaka ireo dia samy manana singa mampirongatra azy koa.
2. Inona ny Austenite Stainless Steel
3. Inona no atao hoe Stainless Steel Martensit
4. Fampitahana mifanila - Austenite vs Martensitic Stainless Steel amin'ny endrika Tabular
Inona ny Austenite Stainless Steel?
Ny varahina matevina Austenitika dia karazana alim-by tsy misy fangarony izay manana fanoherana tsy fandehanana manimba sy fananana mekanika manaitra. Ny firafitry ny kristaly voalohany amin'ity firaka ity dia rafitra cubic mifototra amin'ny tarehy, ary manana "austenite" (allotrope vy sy tsy magnetika vy na vahaolana vy mavesatra misy singa alloying).
Sary 01: Austenite Stainless Steel
Ankoatr'izay, ity fitaovana ity dia manana tanjaka, hasiana, formability ary ductility tsara kokoa. Ireto fitaovana ireto dia ilaina amin'ny fampiharana cryogenika (ambany) sy mari-pana ihany koa. Ankoatr'izay, tena sarobidy izy ireo. Rehefa mandinika ny firafitra dia manana rafitra cubic mifantoka amin'ny tarehy izy izay misy atoma iray isaky ny zoron'ny goba, ary misy atoma iray isaky ny tarehy (eo afovoan'ny tarehy). Ny firafitra dia niforona rehefa nikela habetsahan'ny nikela nifangaro vy sy chromium. Matetika, ity fitaovana ity dia misy chromium 15% sy nikela 8 hatramin'ny 10%.
Inona ny vy vy martensita?
Ny vy vy martensitika dia alikaola izay manana chromium betsaka kokoa ary matetika tsy misy nikela ao. Ary, ity fitaovana ity dia mety ho karbaona avo na vy ambany karbaona . Ankoatr'izay dia misy vy 12%, chromium 17% ary karbaona 0,10%. Ny toetra mampiavaka an'ity fitaovana ity dia ny toetra mekanika ary ny fanoherana ny fitafiana.
Sary 02: Tweezers vita amin'ny vy vy martensitika
Ankoatr'izay, ny firafitry ny krystaly vy vy martensitika dia rafitra toratelo mifantoka amin'ny vatana. Eto, ny atin'ny zoro tsirairay amin'ny goba dia misy ataoma, ary misy atoma iray eo afovoan'ny goba. Ao amin'ny firafitra fototra, tsy misy nikela amin'ity fitaovana ity. Ho fanampin'izany, ity fitaovana ity dia ferromagnetika, azo hamafisina amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana, tsy fanoherana ny harafoana sns.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny vy tsy manara-penitra Austenitika sy Martensitika?
Ny vy vy austenitika dia karazana alim-by tsy misy fangarony izay manana fanoherana manimba harafesina sy fananana mekanika manaitra, raha ny vy vy martensitika kosa dia firaka manana chromium betsaka kokoa ary mazàna tsy misy nikela ao. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vy austenitika sy martensitika dia ny firafitry ny krystaly austenitika vy dia endrika kibika mifantoka amin'ny tarehy ary ho an'ny vy vy martensitika dia rafitra toratelo eo afovoan'ny vatana.
Ankoatr'izay, ny tsy fitovizan'ny vy austenitika sy martensitika dia ny nickel, fa ny vy vy martensitika tsy. Ny atiny nikela amin'ny endrika austenitika dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 10%. Ankoatr'izay, ny endrika austenite dia diamagnetika raha ny endrika martensitika dia ferromagnetic .
Famintinana - Austenite vs Martensitic Stainless Steel
Ny vy vy austenitika dia karazana alim-by tsy misy fangarony izay manana fanoherana manimba harafesina sy fananana mekanika manaitra, raha ny vy vy martensitika kosa dia firaka manana chromium betsaka kokoa ary mazàna tsy misy nikela ao. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny vy austenite sy martensitika dia ny firafitry ny kiran'ny austenitika vy vy dia endrika cubic centered-tarehy fa ny firafitry ny kristaly vy vy martensitika dia rafitra cubic mifantoka amin'ny vatana.
1. "Austenite Stainless Steel." Austenitika Stainless Steel - topy maso | Lohahevitra momba ny siansa mivantana , misy eto .
1. “Firafitra tsy voafehy amin'ny vy tsy metisy 304” Nosoratan'i Webcorr - Asa manokana (CC BY-SA 3.0) avy amin'ny Wikimedia Wikimedia
2. "Tweezers vita amin'ny vy tsy metaly martisitra JIS SUS410" Nosoratan'i Yapparina - Asa manokana (CC0) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny reaktoran'ny nokleary sy ny baomba nokleary Fahasamihafana eo amin'ny UPVC sy CPVC Fahasamihafana eo amin'ny fanamorana ny atmosfera sy ny fanadiovana volo Fahasamihafana eo amin'ny Linoleum sy ny marmolika Fahasamihafana eo amin'ny phosfat organika sy anorganika
Fahasamihafana eo amin'ny sombintsombin'ny mol sy ny lanjany
Fahasamihafana eo amin'i Toshiba Miroborobo sy iPad 2
Fahasamihafana eo amin'ny trano ambany sy ny trano ambony
Fahasamihafana eo amin'ny Spectroscopy Atomika sy ny Spectroscopy Molecular
Fahasamihafana eo amin'ny kapila sy kapila